Ungayifaka kanjani i-Anaconda ngesinyathelo ngesinyathelo seVPS ngendlela elula | Kusuka kuLinux
Ungayifaka kanjani i-Anaconda ku-VPS
Isaka | | I-GNU / Linux, Amanethiwekhi / Amaseva, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Abantu abaningi abasebenza nePython sebeqalile ukuqaphela ifayela le- Iphrojekthi ye-Anaconda. Ukusatshalaliswa komthombo ovulekile futhi ovulekile kwezilimi zePython noR. Kusetshenziswa kabanzi kusayensi yedatha nasekufundeni komshini. Ngakho-ke, amanani amakhulu emininingwane angacutshungulwa ukuze ahlaziywe ngokushesha.
Impela kulula ukufaka, ukusebenzisa nokuvuselela, ngaphezu kokuhambisana namaphrojekthi abaluleke njengeTensorflow. Yebo, kulesi sifundo, ngizokukhombisa ukuthi ungasakha kanjani isibonelo sefu le-VPS ukufaka i-Anaconda lapho ...
1 Kuyini ukusatshalaliswa kwe-Anaconda?
2 Izici Zokusabalalisa ze-Anaconda
3 Yini iVPS?
4 Faka i-Anaconda igxathu negxathu
4.1 Dala i-akhawunti ye-Clouding bese ulungisa ipulatifomu ye-VPS
4.2 Faka i-Anaconda
Kuyini ukusatshalaliswa kwe-Anaconda?
I-Anaconda imane nje iyi-suite yomthombo ovulekile, ngaphansi kwelayisense le-BSD, equkethe uchungechunge lwezinhlelo zokusebenza nemitapo yolwazi ye isayensi yedatha ngezilimi zokuhlela ezifana nePython. Lokhu kusatshalaliswa kolimi oludumile lohlelo kusebenza njengomphathi wezemvelo, umphathi wephakeji futhi kunenqwaba enkulu yamakhulu amaphakheji.
Ngaphakathi kwe-Anaconda Distribution ungathola amabhlogo amane ayisisekelo:
I-Anaconda Navigator (i-GUI yokuphathwa kwayo okulula nokunembile).
Imitapo yolwazi yesayensi.
UConda (umyalo wokuphathwa kwe-CLI)
Konke izofakwa ngokuzenzakalela ngokufakwa kwephakeji, njengoba ngizobonisa igxathu negxathu kamuva.
Izici Zokusabalalisa ze-Anaconda
I-Anaconda Distribution ine izici ezithakazelisayo lokho kukwenza kubaluleke kakhulu emhlabeni wokuhlaziywa kwedatha. Okuphawuleka kakhulu yile:
Akuncikile kunoma iyiphi inkampani, ngoba igcinwa ngumphakathi futhi ingumthombo ovulekile, futhi imahhala.
I-cross-platform, ngakho-ke ingasebenza kuzo zombili i-GNU / Linux, macOS neWindows.
Kulula kakhulu, ukukwazi ukufaka nokuphatha amaphakheji nezindawo zesayensi yedatha kalula futhi ngokushesha.
Amaphrojekthi amaningi esayensi ayisebenzisa, ngakho-ke inokwethenjelwa ngokuphelele.
Igcwele amathuluzi awusizo okwenza umsebenzi wakho ube lula, ngisho nasekufundeni komshini.
Iyahambisana nababukeli bedatha abanjengoMatplotlib, iDatashader, iBokeh, iHoloviews, njll.
Ukuphathwa okuthuthukile futhi okunamandla kakhulu, okungenzeka kutholakale izinsiza zokufunda ngomshini osezingeni eliphakeme.
Ngeke ube nezinkinga ngokuncika kwephakeji nokulawulwa kwenguqulo.
Dala futhi wabe ngamadokhumenti ngekhodi yokuhlanganiswa bukhoma, izibalo, izincazelo, nezichasiselo.
Ungahlanganisa ikhodi yomthombo wePython kunoma yimuphi umshini ukuze usetshenziswe ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, izokwenza lula ukubhalwa kwama-algorithms ayindida afanayo.
Isekela ukusebenza kwekhompyutha okuphezulu.
Amaphrojekthi ase-Anaconda ayaphatheka, ngakho-ke angabiwa noma asatshalaliswe kwamanye amapulatifomu.
Noma ungafaka i-Anaconda Distribution kwi-PC ejwayelekile, noma kuseva yakho, kulesi sifundo sizokukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani ku iseva yeVPS, ngoba inezinzuzo ezilandelanayo, njengokuthi ingaphathwa kude ngabasebenzisi abaningana, umkhawulokudonsa omkhulu, ukusabalalisa, ukutholakala okuphezulu, nezindleko ezinkulu zokugcina uma kuqhathaniswa nenketho yokuba neseva yakho.
Ngemali encane yokubhalisa, ungaba nensizakalo I-VPS (Iseva Yobumfihlo Yobumfihlo), okungukuthi, iseva yangasese ebonakalayo. Kulokhu ngizothembela ku-Clouding kokufundiswa. Ngakho-ke, kufanelekile ukusho ukuthi le VPS ngokuyisisekelo "iyiphasela" elizinikele ngokukhethekile lesikhungo sedatha salo mhlinzeki. Kuyo ungenza noma yini oyifunayo, njengokufaka isiphakeli seLinux nenqwaba yezinhlelo zokusebenza. Kulokhu, sizofaka i-Anaconda.
Le VPS izosebenza njengomshini ozimele, okungukuthi, nge-RAM yayo, enendawo yayo yokugcina kuma-hard drive e-SSD asheshayo, ngochungechunge lwama-CPU cores abelwe, kanye nohlelo lokusebenza.
Futhi ngeke kudingeke ukhathazeke ngokuphatha i-hardware yesikhungo sakho sedatha, noma ukukhokha imali yamandla noma ye-broadband yokuba neseva, ingasaphathwa eyayo izindleko zengqalasizinda ezidingekayo...
Faka Anaconda isinyathelo ngesinyathelo
Insiza ekhethiwe, njengoba ngiphawule, kunjalo Kusibekele.io, lapho ngizokwakha khona isibonelo noma i-VPS ngohlelo lokusebenza lwe-GNU / Linux lapho faka i-Anaconda ngendlela elula. Ngaleyo ndlela, ungaqala ngesayensi yedatha ngeziqinisekiso ezinikezwa yilo mhlinzeki, ngoba inokusekelwa okungama-24/7 ngeSpanishi uma kwenzeka okuthile, futhi isikhungo sayo sedatha siseBarcelona, ​​ngakho-ke, singaphansi kwemithetho yokuvikelwa kwedatha yaseYurophu. Ngakho-ke ukugwema i-GAFAM / BATX, into ecishe ibaluleke kulezi zikhathi ...
Dala i-akhawunti ye-Clouding futhi ulungiselele ipulatifomu yeVPS
Ngaphambi kokuba siqale, into yokuqala ukuthi finyelela isevisi ye-Clouding. Ungayifinyelela kusuka kuwebhusayithi yayo esemthethweni bese ukhetha isilinganiso esivumelana kangcono nezidingo zakho. Lawa mazinga ayahluka ngenani le-RAM, isitoreji se-SSD, ne-CPU vCores ozoba nayo kwiVPS yakho. Noma udinga okungaphezulu kokunikezwa yilezi zilinganiso, unenketho yokumisa iseva yangokwezifiso.
Ukuba yiphrojekthi yokuhlaziywa kwedatha yesayensi, kungathakazelisa uma unayo enkulu kunazo zonke bala ukusebenza kungenzeka, kanye namanani amahle we-RAM. Noma ngabe uzoyisebenzisela amaphrojekthi anesizotha, ngeke kudingeke kakhulu ...
Lapho usubhalisile futhi walandela izinyathelo zewizard, kanye nokuqinisekisa ikheli lakho le-imeyili, uzokwazi ukufinyelela kuphaneli yakho. Ngalokho, kufanele Ngena ngemvume ku-Clouding:
Usuvele usenkonzweni, futhi uzobe ubona iphaneli yayo yokulawula enembile. Uma ufuna ukuqala ukudala isibonelo noma iseva ye-VPS, kufanele uchofoze Chofoza lapha ukudala iseva yakho yokuqala:
Lokhu kukuletha kufayela le- ukumiswa kwesikrini kwiseva yakho yeVPS. Into yokuqala ozoyibona inketho yokubeka igama olifunayo ku-VPS yakho. Ngemuva kwalokho uhlobo lwesistimu yokusebenza ofuna ukuyifaka. Ungakhetha phakathi kweWindows noma iLinux, futhi ngaphakathi kwesigaba seLinux kunama-distros amaningi atholakalayo. Kulokhu ngikhethe Ubuntu Server 20.04, kepha ungakhetha leyo oyithandayo:
Uma usuqedile, yehla kulelo khasi futhi uzobona ezinye izinketho ukukhetha ifayela le- izinsiza kusebenza zehadiweUmthamo we-RAM, umthamo wesitoreji se-SSD, noma inani lama-CPU cores okufanele uwabe ku-VPS yakho. Gcina wazi ukuthi ungabaphatha ngendlela othanda ngayo, noma ngabe ufuna ukudala i-VPS eningi bese uyisabalalisa phakathi kwabo… Futhi, khumbula, ungahlala ukala ngohlelo oluphakeme, uma ulidinga.
Futhi unezinketho zokumisa i-Firewall noma izipele. Empeleni, akudingekile ukuthi uthinte lokho, noma ngabe unakho ukukhetha ukuthuthukisa ezokuphepha, qhubeka. Okubalulekile ukuthi dala bese uqamba ukhiye we-SSH. Siyabonga ngakho, ungafinyelela kude ukude ukuphatha i-VPS yakho ngaphandle kokucela iphasiwedi yakho njalo.
Bheka ukuthi konke kuhamba kahle yini nokuthi cindezela U-Eviar. Lokho kuzokusa kwesinye isikrini lapho iVPS yakho isivele ivele khona. Ngokwesimo uzobona ukuthi isafaka futhi iyalungisa. Kepha ungakhathazeki, kwenziwa ngokushesha okukhulu:
Emizuzwini embalwa uzobona ukuthi isiqedile futhi inkambu yesimo izovela njengo Isebenza. Ngaleso sikhathi, ungasebenzisa uhlelo lwakho lokusebenza ukufaka okudingayo (kuleli cala i-Anaconda).
Chofoza igama ozifakile kuVPS yakho futhi ikuqondisa kwelinye ikhasi ngesifinyezo semininingwane yeseva lapho uzofaka khona i-Anaconda:
Ngakho-ke, okubalulekile indawo ibizwa Ungayithola kanjani iseva. Yilapho ulwazi oludingayo ukufinyelela, i-IP ye-VPS, njengephasiwedi, umsebenzisi (impande) noma ukhiye weSSH wokulanda.
Kusuka kuyo yonke le datha, nge Iseva IP, impande nephasiwedi manje usungangena kude ukude nokufaka i-Anaconda ...
Manje konke sekumi ngomumo ngefayela le- Ukufakwa kwe-Anaconda ku-VPS. Ngalokho, ungavakashela iwebhusayithi yabo ukufunda imininingwane eminingi mayelana nephrojekthi noma uhlole inguqulo yakamuva etholakalayo.
Ukuze uqalise, kufanele finyelela kuseva yakho yeVPS ukude ngeSSH. Ngaleyo ndlela, kusuka ku-distro yangakini, ungafaka konke okudingayo kuseva. Kuzoba lula njengokuvula i-terminal yakho bese uthayipha umyalo olandelayo (khumbula ukufaka esikhundleni se-youripdelserver nge-IP ye-VPS oyibone ekuqaleni kwe-Clouding):
Ngizokubuza iphasiwedi, usike le u-Clouding akukhombise yona wayinamathisela. Lokho kuzokunikeza ukufinyelela. Uzobona ukuthi ukwaziswa kwesiginali sakho sekuguqukile, akususeyona indawo yomsebenzisi wakho, kepha manje sekungomshini okude. Ngakho-ke, yonke imiyalo oyithayipha lapho izokwenziwa kuseva yeVPS.
Manje njengoba usunokufinyelela, into elandelayo okufanele uyenze ukuqala landa bese ufaka i-Anaconda ngemiyalo elandelayo ukuyiletha enkombeni yesikhashana futhi uthole inguqulo itholakala kumakhosombe asemthethweni:
Ngemuva kwalokho, uzoba no-Anaconda, okulandelayo qinisekisa ubuqotho yedatha elandiwe kusetshenziswa isamba se-SHA-256. Ngalokho, vele usebenzise umyalo olandelayo:
Y izobuyisa i-hashi ukuphuma.
Manje kufanele qala u-Anaconda ngomyalo olandelayo:
Lokho kuzokuyisa emlayezweni okucela ukuthi ucindezele u-ENTER bese wona uzokuyisa esivumelwaneni selayisense sika-Ananconda. Ungaya ekugcineni ngokucindezela INTRO futhi izokubuza ukuthi ngabe ufuna ukuphendula ngoyebo noma cha. Lokho wukuthi, uma wamukela imibandela noma cha. Thayipha u- "yebo" ngaphandle kwezilinganiso bese ucindezela u-ENTER. Into elandelayo ozoyibona yile:
Isinyathelo esilandelayo ukukhetha indawo yokufaka. Cindezela ENTER ukuthola indlela ekhonjiswe ngokuzenzakalela noma faka indlela ehlukile uma uthanda ... Manje ukufakwa kwe-Anaconda kanjalo kuzoqala. Kuzothatha isikhashana.
Nini inqubo isiqediwe, uzothola umyalezo ofana nalona olandelayo, okhombisa ukuthi uqede ngempumelelo:
Thayipha Yebo ukuqala i-conda. Manje izokubuyisela kokwaziswa kweVPS yakho. Unokunye okusele ngaphambi kokusebenzisa i-conda, futhi lokho kungukufaka ukufakwa nge:
Futhi manje usungakwazi sebenzisa i-conda bese uqala ukunikeza u-Anaconda ewusizo ... Isibonelo, ungabona usizo mayelana nezinketho bese ubhala amaphakheji atholakalayo ngokulandelana nge:
Ngisho nokusethela imvelo u-Anaconda ukuthi sebenzisa i-python3, Ngokwesibonelo:
Phendula y embuzweni ocela ukuqhubeka futhi okudingekayo kuzofakwa.
Ungavele sebenzisa imvelo entsha ukuqala ukusebenza futhi ujabulele ...
Manje njengoba sesifake konke futhi sisebenza, ukwazile ukuqinisekisa amandla nokuguquguquka okunikezwa ukusingathwa kweVPS njengalokhu esikukhombise kona ku-Clouding. I-Anaconda ingenye yezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza namathuluzi ongazifaka futhi uwasebenzise. Akuyona yonke into eyehlayo ekudaleni amawebhusayithi. Kunezinketho eziningi ongazisebenzisela i-VPS. Uma unemibuzo, sishiya amazwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Amanethiwekhi / Amaseva » Ungayifaka kanjani i-Anaconda ku-VPS
IKubeflow: Ithuluzi Lokufunda Lomshini lamaKubernetes
I-University of Minnesota ivinjelwe kusuka ekuthuthukisweni kwe-Linux kernel